Kuzvipira kwedu kune Yakavanzika - Tai mukudhinda & kupakata Co, Ltd.
Kuzvipira Kwedu kune Yakavanzika
Tai mumapakeji anozvipira kutsigira zvakavanzika zvako. Kuti uve nechokwadi chekuvanzika kwako, isu takatumira ichi chiziviso chinotsanangura zvese ruzivo rwatinotora uye nemashandisiro atinoita isu.
Yedu saiti inoshanda kushandira vatengi vedu uye kuvabvumidza kuzadzikisa zvavanoda zviri nyore uye zvisingaite sezvinobvira. Tinogona kuunganidza inotevera ruzivo:
Ruzivo rwatinotora runongoshandiswa chete kunzwisisa zvaunoda uye kupindura kumibvunzo yako. Isu hatipe chero ruzivo kune mapato ekunze kunze kwekutumira ruzivo rwunodiwa kuendesa zvigadzirwa kune vatengi. Tinogona kupota tichitumira maemail ekusimudzira nezve zvigadzirwa zvitsva, zvipo zvakakosha kana rumwe ruzivo rwatinofunga kuti ungawana runonakidza uchishandisa kero yeemail yawakapa. Iwe unogona kukanzura iyo email sevhisi chero nguva.
Kuzvipira kwedu kuData Kuchengetedzwa
Takazvipira kuona kuti ruzivo rwako rwakachengeteka. Kudzivirira kupinda kusingabvumirwe, kuchengetedza kunyatso dhata, uye kuona kushandiswa kwakakodzera kweruzivo, takaisa nzira dzakakodzera dzemuviri, zvemagetsi, uye manejimendi kuchengetedza nekuchengetedza ruzivo rwatinotora online.
Isu tinoshandisa traffic log kuki kuti tione kuti ndeapi mapeji ari kushandiswa. Izvi zvinotibatsira kuongorora data nezvewebhu peji traffic uye nekuvandudza yedu webhusaiti kuitira kuti igadzirise zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Isu tinoshandisa ruzivo urwu rwehuwandu hwezvinangwa zvekuongorora. Isu tinogona zvakare kushandisa ruzivo urwu kukupa iwe kushambadzira kana kushambadzira.
Pakazara, makuki anotibatsira kukupa iwe webhusaiti irinani nekutigonesa kuongorora kuti ndeapi mapeji aunowana anobatsira uye ausingaiti. Kuki hapana inotipa mukana wekuwana komputa yako kana chero ruzivo nezvako, kunze kwedata raunosarudza kugovana nesu. Unogona kusarudza kugamuchira kana kuramba makuki. Mazhinji mabhurawuza ewebhu anogamuchira otomatiki makuki, asi iwe unogona kazhinji kugadzirisa yako browser marongero ekuramba makuki kana uchida. Izvi zvinogona kukutadzisa iwe kutora zvakazara mukana webhusaiti.
Zvinongedzo ku Other Websites
Webhusaiti yedu inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti. Nekudaro, kana iwe uchinge washandisa izvi zvinongedzo kusiya yedu saiti, iwe unofanirwa kucherechedza kuti isu hatine chero kutonga pamusoro peiyo imwe webhusaiti. Naizvozvo, hatigone kuve nebasa rekudzivirira uye kuvanzika kwechero ruzivo rwaunopa iwe uchishanyira nzvimbo dzakadai nenzvimbo dzakadai hazvitungamirirwe neichi chirevo chekuvanzika. Iwe unofanirwa kushandisa chenjedzo uye tarisa kune yakavanzika chirevo inoshanda kune webhusaiti iri mubvunzo.
Kudzora Yvedu Personal Iruzivo
Iwe unogona kusarudza kudzora kuunganidzwa kana kushandiswa kwemashoko ako ega. kana iwe wakambobvumirana nesu tichishandisa ruzivo rwako rwega nekuda kwekushambadzira zvakananga, unogona kuchinja pfungwa dzako chero nguva nekunyora kana kutumira tsamba paemail ku service@taiinpackaging.com, Musoro: Ruzivo rweMunhu Rwekuvandudza.
Hatisi kuzotengesa, kugovera kana kubhadharisa ruzivo rwako pachako kune vechitatu kunze kwekunge tine mvumo yako kana tinodikanwa nemutemo kuti tidaro.
Kana iwe uchidavira kuti chero ruzivo rwatakabata pauri haruna kunaka kana kuti haruna kukwana, ndapota nyorera kana kutumira email kwatiri nekukurumidza sezvazvinogona. Isu tinokurumidza kururamisa chero ruzivo rwunowanikwa rwusina kunaka.
Maitiro Ekutibata Nesu
Unofanirwa kunge uine mimwe mibvunzo kana kunetsekana nezve aya maratidziro epamutemo, ndapota titumire email pa service@taiinpackaging.com.
Yekusimudzira Bhegi, Kukwidziridzwa Chipo, Lamination Chipo Bhokisi, Chipo Bhokisi, Corrugated Carton Bhokisi, Kisimusi Chipo Bhokisi,